ဂိမ်းကောင်းကောင်းဆော့ဖို့ Smartphone တွေမှာ ဘာလိုအပ်လဲ?
Smartphone တစ်လုံးအတွက် Performance က အရေးကြီးဆုံးအချက်ဆိုပေမယ့် Display ကရော ဘယ်လောက် အရေးပါလဲ? အများစု သိနေတာ AMOLED Panel ၊ 90 ဒါမှမဟုတ် 120Hz Refresh Rate နဲ့ ကြားဖူးနားဝ HDR Certified ၊ DCI-P3 Colour Format ထောက်ပံ့မှုတွေကရော ဘာ Effective ဖြစ်စေလဲ?
တကယ်တော့ စမတ်ဖုန်း မျက်နှာပြင်နဲ့ နေ့တဓူဝ ထိတွေ့နေရတဲ့ ကျွန်တော်တို့ အမြင်အာရုံ ထိခိုက်လာနိုင်တယ် တနည်း ကျန်းမာရေး ရှုဒေါင့်ကပြောရင် အနည်း ၊ အများ ဆိုးကျိုး သက်ရောက်မှု ရှိစေတာ သတိမထားမိကြပါဘူး။ နည်းပညာတိုးတက်လာတဲ့ အချိန် PUBG Mobile နဲ့ Fortnite ၊ ML (Mobile Legends) လို ဂိမ်းမျိုးတွေ ၅ လက်မ အရွယ် စမတ်ဖုန်းနဲ့ ကစားလို့ရလာတဲ့အခါမှာတော့ စိုးရိမ်စရာ တချို့ရှိလာခဲ့ပါတယ်။
OPPO Reno3 (Image: Android Pit)
ဒါကတော့ Display Panel ကနေ ထုတ်လွတ်နေတဲ့ Blue Light ဖြစ်ပြီး မျက်နှာပြင်ကို ကြာကြာကြည့်ဖန် များလာတာနဲ့အမျှ အမြင်အာရုံဝေဝါးလာတယ်၊ Flickering ဖြစ်လို့ မျက်လုံးညောင်းပြီး ခေါင်းကိုက်တာမျိုးတွေပါ ကြုံရလာတတ်ပါတယ်။
ဒိအတွက် စမတ်ဖုန်းတွေမှာ Harmful Blue light ကို လျှော့ချပေးနိုင်မယ့် နည်းပညာအပြင် Anti Flicker တွေပါ ထည့်ပေးလာပါတယ်။ ကျန်းမာရေးရှုဒေါင့်နဲ့ ပတ်သက်လို့ အရေးကြီးတာ ပြောပြီးသွားရင် Display Quality ဖက် ဆက်သွားပါမယ်။
အရင်ဆုံး Smooth Gameplay ကို ဘယ်လိုနားလည်ထားလဲ? အရိုးရှင်းဆုံး ပြောရင်တော့ 60fps နဲ့အထက် ပြေးနေတဲ့ အနေထားကို Smooth လို့ ရည်ညွန်းတာဖြစ်ပြီး ဒီလိုအခြေနေမျိုး ရရှိဖို့ အချက် ၃ ချက် လိုအပ်ပါတယ်။
OPPO Reno3 Series (Image: Arabian Business)
ပထမဆုံးက စမတ်ဖုန်းမှာ ပါဝင်လာတဲ့ Processor ၊ ဒုတိယက Supported Game နဲ့ OS ဖြစ်ပြီး တတိယ အရေးပါသူက Display Panel ပါ။ စာဖတ်သူတွေက သိထားနေကြ Refresh Rate နဲ့ ပတ်သက်လို့ အရင်ပြောရရင် မြန်လေ ကောင်းလေ ဥပမာ 90Hz နဲ့ ဆော့နေသူက ရန်သူကို 60Hz Display နဲ့ ကစားနေသူထက် စက္ကန့်ပိုင်းလောက် အရင်မြင်တယ်။
ဒီနေရာမှာ ဝိသေသကွဲပြီး နားမလည် ၊ ဇဝေဇဝါဖြစ်နေတာ Refresh Rate (Hz) နဲ့ fps (Frame Per Second) ပါ။ 90Hz ဖြစ်တိုင်း 90fps ရတယ်လို့ မဆိုလိုပါဘူး၊ ဖုန်းတစ်လုံးမှာပါဝင်တဲ့ CPU နဲ့ GPU က တွက်ထုတ်ပေးလိုက်တဲ့ Frame per Second (fps) ကို Display Panel က နားလည် လက်ခံပြီး တစ်စက္ကန့်မှာ တွက်ချက်လိုက်တဲ့ ဥပမာ 60fps ၊ 90fps ပမာဏကို ထောက်ပံ့ထားတဲ့ Refresh Rate Limit အတိုင်း ဖော်ပြပေးတာပါ။
Smartphone အနေနဲ့ ပြောရင် OPPO Reno3 Pro မှာ 90Hz Refresh Rate ကို ထောက်ပံ့ထားလို့ ကစားသမျှ ဂိမ်းတွေကို CPU နဲ့ GPU က တွန်းရင်တွန်းသလောက် အမြင့်ဆုံး 90fps နဲ့ ကစားနိုင်မှာပါ။ ဒါကတော့ Display Panel ရဲ့ Refresh Rate အရေးပါမှုဖြစ်ပြီး သူနဲ့တွဲရက်လိုက်နေတာ Touch Sensing Rate ပါ။
အများစုက Refresh Rate နဲ့ သွားရောတတ်သလို Motion Smoothness နဲ့ သက်ဆိုင်တယ်လို့ လက်ခံထားကြတယ်။ တကယ်တော့ အဲ့လိုမဟုတ်ပါဘူး၊ Sensing Rate ဆိုတာ CPU ၊ GPU တို့နဲ့ မသက်ဆိုင်သလို Refresh Rate အတွက် ထောက်ပံ့ထားတဲ့ နည်းပညာလို့လည်း မဆိုကြပါဘူး။
ဒါပေမယ့် အရမ်းမြန်နေတဲ့ Screen ဥပမာ 90Hz Screen ကို သုံးတဲ့အခါ ဒီကောင့်ရဲ့ အရေးပါမှုက သိသာပါတယ်။ Polling Rate လို့လည်း ပြောနိုင်သလို Screen နဲ့ ထိသမျှ Physical Contact (စာလိုပြောရင်တော့ ကျနော်တို့လက်ပေါ့၊) ကို အမြန်ဆုံး Millisecond (ms) Rate နဲ့ Sensing လုပ်ပေးနေတာပါ။
များသောအားဖြင့် Sensing Rate ဟာ Refresh Rate ထက် ပိုများလေ့ရှိပြီး နှစ်ချိုးတစ်ချိုး ဒါမှမဟုတ် သုံးချိုးတစ်ချိုး၊ လေးချိုးတစ်ချိုး လာတတ်ပါတယ်။ Reno3 Pro မှာ 180Hz Touch Sensing Rate ပါဝင်ပြီး Display Refresh Rate ထက် ပိုများပါတယ်။
ဒါရဲ့ အားသာချက်က Ultra Responsive Gameplay အတွက် အသုံးဝင်ပြီး Screen နဲ့ ထိသမျှကို အလျင်မြန်ဆုံး တုံ့ပြန်နိုင်စွမ်းရှိပါတယ်။ ဒီတော့မှ 90Hz Refresh Rate Display ရဲ့ အခန်းကဏ္ဍပြည့်စုံသွားသလို ဘာလို့ထည့်ပေးရတဲ့ အကြောင်းရင်းကိုလည်း သိပြီထင်ပါတယ်။
ကြားညပ်ပြောလိုတာက Entertainment ပိုင်းအတွက် ထည့်သွင်းပေးထားတဲ့ Display Features ၊ Audio Function တွေကလည်း အရေးပါပါတယ်။ ဥပမာ Vivid Screen ထက် Natural Screen က ပိုကြည့်ကောင်းသလို OSIE Vision က Anti-flicker ဖြစ်တာ လျှော့ချနိုင်တယ်။
စမတ်ဖုန်းမှာ ပါဝင်လာတဲ့ Dolby Atmos က အသံပိုင်း အားဖြည့်ထားတဲ့ Software ဖြစ်ပြီး Hi-Res Audio ကို ထောက်ပံ့နိုင်တယ်။
Smartphone Power System (A.I)
Reno3 Pro မှာ Frame Rate Optimization လုပ်ဆောင်ချက် ပါဝင်လာသလို ဒီကောင့်ရဲ့ အားသာချက်က 16% Performance Boost လုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ နောက်တစ်ခု OPPO ဖုန်းတွေမှာ ပါဝင်နေကျ Hyper-boost ဆိုတာကတော့ System Level Performance ကို ထပ်တင်ပေးနိုင်တဲ့ AI လုပ်ဆောင်ချက်ပဲ ဖြစ်ပြီး သုံးစွဲနေတဲ့ RAM ပမာဏကို လျှော့ချနိုင်တယ် (မလိုအပ်တဲ့ Running App ပိတ်တာမျိုးကို ဆိုလိုတာပါ)
Display နဲ့ Performance ပိုင်းတော့ ဟုတ်ပါပြီရဲ့၊ ဂိမ်းဆော့တဲ့အခါ ပူလောင်နေတဲ့ ဖုန်းကို လက်ထဲကိုင်ထားချင်လား? အားသွင်းနေတုန်း Heat တက်တာ လက်ခံရပေမယ့် ပူလွန်းလို့ အေးတဲ့ကြမ်းပြင်ပေါ် ချထားရပြီး Cool Down လုပ်ရတာမျိုး ကြုံဖူးကြလား?
Reno3 စီးရီးမှာတော့ အပူလွန်ကဲတဲ့ဖြစ်စဥ်မျိုး မကြုံရလေအောင် Cooling System ထည့်ပေးထားပါတယ်။ သဘောကျမိတဲ့ အချက်တစ်ချက်က ဖုန်းတစ်လုံးလိုအပ်တဲ့ Power Delivery System ကို လုံခြုံမှုရှိအောင် တစ်နည်း Safe Guard ထည့်ပေးထားတဲ့ VOOC Fast Charging စနစ်ပါ။
Safe Guard Issue
VOOC Flash Charging နည်းပညာမှာ အဆင့် ၅ ဆင့်နဲ့ ကာကွယ်ထားတဲ့5Layer Protection စနစ်ပါဝင်ပါတယ်။ မီးအား အတက်၊ အကျကြောင့် ရုတ်တရက် ဆောင့်တက်တာမျိုး၊ အားသွင်းနေရင်း Over Heat ဖြစ်လာတာကို လျှေ့ာချပေးမယ့် Multi-Cooling စနစ် ထည့်သွင်းထားတာက ပိုပြီးတော့ Secure ဖြစ်စေတာပါ။
Reno3 Pro မှာ VOOC 4.0 (30W) နဲ့ Reon3 မှာ VOOC 3.0 (20W) Fast Charging စနစ်တွေပါဝင်ပြီး စိတ်ချလုံခြုံစွာနဲ့ အားသွင်းအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ အထူးခြားဆုံးက ဂိမ်းဆော့နေရင်း အားသွင်းတဲ့အခါမျိုးမှာ စမတ်ဖုန်း ထိခိုက်မှုကို လျှော့ချပေးနိုင်မယ့် TUV Rheinland Safe Fast-charge System ပါဝင်လာတာ ဖြစ်ပါတယ်။
အဲ့ဒါကြောင့် Reno3 Series ဟာ Performance ပိုင်းနဲ့ နည်းပညာလုပ်ဆောင်ချက်တွေကို အချိုးကျ ပေါင်းစပ်ထားတဲ့ ဖုန်းတစ်လုံးလို့ ပြောနိုင်ပါတယ်။ ရောင်းချထားတဲ့ စျေးနှုန်းတွေက Reno3 Pro ကို မြန်မာငွေ ၆၂၉,၉၀၀ ကျပ်နဲ့ ဝယ်ယူနိုင်မှာဖြစ်ပြီး MTK p95 Processor ၊ 8GB RAM နဲ့ 256GB Storage ပါဝင်မှာပါ။ Reno3 ကိုတော့ ၄၉၉,၉၀၀ ကျပ်နဲ့ ဝယ်ယူနိုင်မှာဖြစ်ပြီး MTK P90 Processor ၊ 8GB RAM နဲ့ 128GB Storage တို့ အသုံးပြုထားပါတယ်။
OPPO Myanmar Content ကို ဆီလျော်သလို တင်ဆက်ထားခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
OPPO Reno3 Series Homepage
စမတ်ဖုန်း Photography ရဲ့ မှတ်ကျောက်ဖြစ်လာတဲ့ P40 Series ကင်မရာထူးခြားချက်များ